सलाम स्वास्थ्यकर्मी ! – HKNepal.com – हङकङबाट सञ्चालित पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
सलाम स्वास्थ्यकर्मी !
कोरोना समाचार सिफारिस स्वास्थ्य
धनगढी । डा. नीराजन शर्मा पौडेल एकाबिहानै उठ्छन्। आफ्नो नित्यकर्मपछि उनी ८–८:३० बजेतिर क्लिनिकमा पुग्छन्। त्यहाँ कुरिरहेका बिरामीको उपचारपछि उनी १० बजे सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुग्छन्।
अस्पतालमा उनी नर्मल आईसीयूसहित मेडिसिन विभागमा भर्ना भएका बिरामीलाई राउन्ड गर्छन् । त्यसपछि उनको ओपीडी हुन्छ । ओपीडीमा आएका बिरामी हेर्ने कार्य अपराह्न १ बजेतिर सकिन्छ । त्यसपछि उनी दिउँसो एक घण्टा खाना खान निस्किन्छन् । त्यसपछिको समय उनको फेरि ओपीडीमा रिपोर्ट हेर्नेमा बित्छ ।
अपराह्न ४ बजेपछि उनी अस्पतालको कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल जान्छन्। त्यहाँ रहेका ५५ भन्दा बढी बिरामीको राउन्ड लिन्छन् । त्यसपछि उनी फेरि सेतीको नर्मल आईसीयूमा रहेका बिरामी, मेडिसिन विभागका बिरामीको राउन्ड हुँदै अबेर राति घर पुग्छन् ।
बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको कोभिड विशेष वार्डमा रात्रिकालीन ड्युटीका क्रममा बेन्चमै झकाएका स्टाफ नर्सहरू प्रीति खड्का, कमला नेपाली र सुनीता सहकारी (१), लामो समय पीपीई लगाएपछि अप्ठ्यारो महसुस गरेकी स्टाफ नर्स प्रीति खड्कालाई स्याहार गर्दै स्टाफ नर्सहरू यमकुमारी थापा र निष्ठा पन्त (२) । यो अस्पतालका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी गरी ९० भन्दा बढी संक्रमित छन् । यही अस्पतालमा २ सय ९९ संक्रमित उपचाररत छन् । र, बाँकेकै नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका डा. पुरुषोत्तम बर्मा आफैं कोरोनाबाट संक्रमित भई उपचाररत रहेको अवस्थामा कोभिड वार्डभित्र अन्य बिरामीको उपचारमा खटिँदै (३)। तस्बिर सौजन्य : डा.चन्द्रप्रकाश साहु र रुपन ज्ञवाली
डा. शर्मा मात्रै होइन, सेती प्रादेशिक अस्पतालका चार वरिष्ठ फिजिसियन डा. शेरबहादुर कमर, डा. सन्तोष पाण्डे र डा. निशान भट्टराईको पनि त्यस्तै दिनचर्या छ। सेती अस्पतालमा यी चार वरिष्ठ फिजिसियनले, नर्मल आईसीयू, ओपीडी, मेडिसिन विभाग, सर्पदंश विभाग र त्यसैमा कोभिडको वार्ड पनि हेर्ने गर्छन् ।
सीमा शर्मा सेती प्रादेशिक अस्पतालकी मेट्रोन हुन् । उनको मातहतमा सेतीमा २४ जना स्टाफ नर्स कार्यरत छन्। उनले १२ जना सेती प्रादेशिक अस्पतालको नर्मल वार्ड र १२ जना कोभिडका लागि खटनपटन गरेकी छन्। कोभिड डेडिकेटेट अस्तालको पनि उनी नर्सिङ विभाग प्रमुख हुन् ।
‘बिहानै ९ बजे ड्युटी सुरु हुन्छ, ३ बजे सकिन्छ । तर, परेका बेला जति बेला पनि जानुपर्छ’, उनले भनिन् । उनले बिहान ८ देखि दिउँसो २ बजेसम्म चार, २ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म चार र बेलुकी ८ देखि बिहान ८ बजेसम्म चार जना गरी नर्सिङ स्टाफको खटन पटन गरेकी छन् ।
‘पाँच जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये तीन जना भर्खर नेगेटिभ भएर ड्युटीमा आएका छन् । दुई जना अझै आइसोलेसनमा छन् । एक सिफ्टमा तीन जना स्टाफ नर्सले ५५ जनाभन्दा बढी कोभिडका बिरामीलाई सेवा दिनुपरेको छ’, उनले भनिन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालको १५ शय्याको आईसीयू, तीन शय्याको भेन्टिलेटर, १० शय्याको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (मोनिटर सहितको अक्सिजनको व्यवस्था) र बाँकी अक्सिजन शय्याहरू तीन जनाले नर्सिङ स्टापले हेरिरहेका छन् ।,
Tags: सलाम, सलाम स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी